Waa maxay khilaafka u dhaxeeya Wasaaradda Waxbarshada Somalia iyo Puntland? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waa maxay khilaafka u dhaxeeya Wasaaradda Waxbarshada Somalia iyo Puntland?
Xubno ka tirsan aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo farageliyey khilaafka xillkigaan u dhaxeeya Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya iyo Dowlad goboleedka Puntland, kadib markii Puntland ay diiday sanadkaan ka qeyb galka Imtixaanka ay qaadeyso Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya.
Xubno ka socda Sanoterada Aqalka Sare ayaa kulan gaar ah waxa ay la qaateen Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi goodax Barre, iyaga oo kala hadlay imtixaanka Dowliga ah ee Dugsiyada sare iyo sidii loo mideyn lahaa, sidoo kalena xal looga gaari lahaa khilaafka.
Sanatarro deegaan doorashadoodu tahay Puntland oo kulanka ka qeyb galay ayaa sheegay inay u baxayaan Puntland si la iskula meel dhigo arrinta imtixaanka mideysan.
Wasiirka Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta sare ee dalka Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa dhankiisa waxa uu xusay in Puntland ay waaya aragnimo u leedahay arrimaha waxbarashada,sidoo kalena uu rajeynayo in Xubnaha Aqalka Sare ay keeni doonaan isku-soo dhawansho Wasaaradda Waxbarashada iyo Maamulka Puntland.
Khilaafka u dhaxeeya Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya iyo Maamulka Puntland ayaa soo ifbaxay todobaad ka hor, kadib markii Wasiir Cabdullaahi goodax Barre uu sheegay in Puntland sanadkaan diiday ka qeyb galka galka Imtixaanka ay qaadeyso Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya.
50 qof oo lagu dilay qaraxyo ka dhacay Sri Lanka (SAWIRRO)
RW Kheyre oo beeniyey in awood loo adeegsado Mucaaradka